နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လာအိုသံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ | NLD
Home Appointment နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လာအိုသံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လာအိုသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Heuangseng KHAMDALAVONG အား ယနေ့မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာ-လာအို ပြည်သူများ၏ ဘုံအကျိုးစီးပွားအတွက် နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် လူမှု-ယဉ်ကျေးမှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး၊ ပြည်သူအချင်းချင်းအကြား ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု မြှင့်တင်ရေး ကိစ္စရပ်များအပါအဝင် ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာနယ်ပယ်၌ အပြန်အလှန် ထောက်ခံပေးသွားရန်တို့ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ လာအိုသံအမတျကွီးအား လကျခံတှဆေုံ့
နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျသညျ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ လာအိုသံအမတျကွီး H.E. Mr. Heuangseng KHAMDALAVONG အား ယနမှေ့နျးလှဲ ၂ နာရီတှငျ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန၊ ပွညျထောငျစုဝနျကွီး၏ ဧညျ့ခနျးမ၌ လကျခံ တှဆေုံ့သညျ။
တှဆေုံ့စဉျ မွနျမာ-လာအို ပွညျသူမြား၏ ဘုံအကြိုးစီးပှားအတှကျ နှဈနိုငျငံ ဆကျဆံရေးနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှု မွှငျ့တငျရေး၊ စီးပှားရေးနှငျ့ လူမှု-ယဉျကြေးမှု ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေး၊ ပွညျသူအခငျြးခငျြးအကွား ထိတှဆေ့ကျဆံမှု မွှငျ့တငျရေး ကိစ်စရပျမြားအပါအဝငျ ဒသေတှငျးနှငျ့ နိုငျငံတကာနယျပယျ၌ အပွနျအလှနျ ထောကျခံပေးသှားရနျတို့ကို ဆှေးနှေးခဲ့ကွကွောငျး သိရသညျ။